Sound of Metal (2019) – Gold Channel Movies
Video Sources 5324 Views Report Error
Music was his world. Then silence revealedanew one.Nov. 20, 2020USA121 Min.R
ဒီတစ်ခါမှာတော့ Sound of Metal ဆိုတဲ့ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ 2019 တုန်းကထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့ IMDB 7.8 ထိရရှိထားပါတယ်။ DRAMA ကားတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါလေးကတစ်ကယ်ကောင်းပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကတော့ ရူဘင်နဲ့ လူး၀စ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးတို့က တီး၀ိုင်းမှာဖျော်ဖြေကြတဲ့သူတွေပါ။ METAL လောကသားတွေပေါ့။ အောင်မြင်နေတဲ့ BAND တစ်ခုကြီးတော့မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့အထာနဲ့သူတို့က ​ကျော်ကြားနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့ကျတော့ ရူဘင်ဆိုတဲ့ ဒရမ်းတီးတဲ့ကောင်လေးမှာ ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ ဒါကတော့သူရဲ့ နားမှာ ချို့ယွင်းချက်ဖြစ်ပြီးတော့ စကားလုံးတွေကိုကောင်းစွာမကြားနိုင်တော့တာပါ။ ဒါကိုရူဘင်က မသိကျိုးကျွံနေခဲ့ရာကနေ တစ်ဖြည်းဖြည်းဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူဟာ ဆရာ၀န်ဆီကိုသွားပြီးတော့စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နားအတွက်ခွဲစိတ်ဖို့ပြုပြင်ဖို့က ဒေါ်လာ ၄သောင်းနဲ့ ၅သောင်းကြားထဲကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာ၀န်က ပြောလာပါတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၀ါသနာအရင်းခံပြီးတော့ ပိုက်ဆံထောက်ပံ့မှုမရှိသေးတဲ့ ရူဘင်ဟာ ဘ၀ကိုစပြီးတော့ရုန်းကန်ရပါတော့တယ်။
ဒီလိုအခက်အခဲတွေအမှတ်မထင်ပဲ သူ့ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးလူး၀စ်ကသိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ စကားပြောဆိုမှုအခက်အခဲတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီး ရူဘင်ကို နားမကြားကျောင်းမှာ လက်ဟန်ပြောဆိုပုံတွေကို လေ့လာစေဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နားကိုခွဲစိတ်ပြီး ပြန်လည်တီး၀ိုင်းတွေကို တိးခတ်ချင်သူ ရူဘင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒါတွေကိုလင်မခံချင်ခဲ့ပါဘူး။ ငြင်းဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် ရှိုးပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းကောင်မလေးက သူမရဲ့ဖခင်ဆီကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကောင်လေးက အားကိုးရာမရတော့တဲ့အဆုံး အဲ့ဒီနားမကြားကျောင်းကိုပဲပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် သူက သူ့ဘ၀အတွက်ဘယ်လို ပြင်ဆင်မလဲ သူအရမ်းလုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ နားခွဲစိတ်တာတွေကိုရော သူဘယ်လိုလုပ်မယ်။ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရမယ်။ ပျော်စရာ ၀မ်းနည်းစရာတွေရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကို ရိုက်ပြထားတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Genres – Drama, Music
Run Time –2Hr
IMDb Rating 7.8 38,817 votes
TMDb Rating 7.8 530 votes
Download Userdrive SD Myanmar 450MB
Download Mega SD Myanmar 450MB